ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီအကြံပေးအဖွဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပ | Myanmar President Office
ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီအကြံပေးအဖွဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပ
ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ အကြံပေးအဖွဲ့၏ ရခိုင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဦးတည်သည့် အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကို ယနေ့ညနေ ၃ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ M-Gallery Hotel ၌ ကျင်းပသည်။
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ၏ အကြံပေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌH.E. Dr. Surakiart Sathirathai က ယနေ့အကြံပေးကော်မတီ၏ အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာကို နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ထံ တင်သွင်းခဲ့ကြောင်း၊ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် စက်တင်ဘာလအစောပိုင်းကတည်းက စတင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခဲ့သည့် အကြံပြုချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်ရှင်းပြ လိုကြောင်း၊ ထိုအချိန်ကတည်းက ကော်မတီအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စကို အလေးထားဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ ယခု ဩဂုတ်လတွင် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဟောင်း ကိုဖီအာနန် ဦးဆောင်သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်အကြံပေးကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပထမဆုံး မိမိအနေဖြင့် ကိုဖီအာနန်ကော်မရှင်၏အကြံပြုချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခဲ့သည့် အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး ကိုချီးကျူးပါကြောင်း။
ဒုတိယအနေဖြင့် အကြံပေးကော်မတီ၏ အကြံပြုချက်များကို သေချာစွာအကောင် အထည်ဖော်သော အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ၏ ကြိုးပမ်းမှုများအပေါ် စိတ်ကျေနပ်မှုရှိသည်ဟု မိမိပြောကြားလိုကြောင်း၊ပြီးခဲ့သည့် ဇန်နဝါရီလနောက်ပိုင်း အပြုသဘောဆောင်သော တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုများ လုပ်ဆောင် နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ဥပမာ ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ မီဒီယာများကိုပိုမို၍ သွားရောက်ခွင့်ပြုခဲ့ သကဲ့သို့ ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ သံတမန်အဖွဲ့များ၊ အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ၏ သွားရောက်လည်ပတ်မှုများ ပိုမိုရှိ လာ ခဲ့ပါကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးသည်လည်း နေရပ်စွန့်ခွာ သူများနှင့်တွေ့ဆုံ၍ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေး အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်နေသည့်ကိစ္စကိုရှင်းပြရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ကော့ဘဇားသို့ သွားရောက်ခဲ့ပါကြောင်း။
ပို၍အရေးကြီးသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြား ဆက်ဆံရေးသည် တိုးတက် လာခဲ့ပါကြောင်း၊ မြန်မာအစိုးရနှင့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့တို့အကြားအထူးသဖြင့် United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR)၊ United Nations Development Programme (UNDP) တို့နှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ပါကြောင်း။
မြန်မာနိုင်ငံက ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အထူးသံတမန်ဖြစ်သူသံအမတ်ကြီး Christine Schraner Burgener ကိုလည်း လက်ခံခဲ့ပါကြောင်း၊အထူးသံတမန်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိကြုံတွေ့နေသော အခက်အခဲများကိုကူညီဖြေရှင်းပေးရန် စိတ်အား ထက်သန်သူ ဖြစ်ကာ ရခိုင်ပြည်နယ်သို့သွားရောက်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ နောက်တစ်ကြိမ် လာရောက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊အကြံပေးကော်မတီ၏ သိသာထင်ရှားသော ဆောင်ရွက် ချက်တစ်ရပ်သည် လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် (Independent Commission of Enquiry)တစ်ခု ဖွဲ့စည်းရေးဖြစ်ပါကြောင်း။
မိမိတို့အကြံပေးအဖွဲ့၏အမြင်သည် ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အပြုသဘော ဆောင်သော တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုများစွာရှိခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်း အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီးချိန်ကတည်းကအကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့၏ အကြံပြုချက် အားလုံးကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခု အပြီးသတ်အစီရင်ခံ စာတွင် မိမိတို့အနေဖြင့် အကြံပြုချက်အချို့ကို ထည့်သွင်းထားကြောင်း။
ဥပမာ စံပြမြို့နယ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရေး ရှေ့ပြေးစီမံကိန်းကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင် သင့်ကြောင်း၊ ရှေ့ပြေးစီမံကိန်းတွင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် နိုင်ငံတကာ အသိုင်း အဝိုင်း၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့် ရွေ့လျားဆေးခန်း တို့ကို အလေးထားဆောင်ရွက်သင့်သည်ဟုအစီရင်ခံစာအတွင်း မိမိတို့ အကြံပြုထား ကြောင်း၊ ထို့ပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်နေ အသိုင်းအဝိုင်းများအကြား အချင်းချင်းဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်သင့်ကြောင်းကိုလည်း အကြံပြုခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းအချက်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မတူညီသောအသိုင်းအဝိုင်းများအကြား ရေရှည်ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ အကြံပေး ဘုတ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အချို့က လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီ၏ခရီးစဉ်များအပေါ် ဆန်းစစ် အကဲဖြတ်ရန် မြန်မာအစိုးရနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်ရန် ဆန္ဒရှိပါကြောင်း။
ဥပမာ ပါမောက္ခ လော့ဒ်ဒါဇီက ရွေ့လျားဆေးခန်းကိစ္စနှင့် စစ်တွေဆေးရုံအဆင့်မြှင့်တင် ရေးလုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒပြင်းပြပါကြောင်း၊ မိမိညာဘက်ရှိရိုလော့ဖ်ပတ်ထရပ်စ်ကလည်း မတူညီသည့် အသိုင်းအဝိုင်းများအကြား ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပုံနှင့်ပတ်သက်၍ တောင် အာဖရိကနိုင်ငံ၏ အတွေ့အကြုံကို မျှဝေပေးလိုပါကြောင်း။
ကိုဖီအာနန်ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာအတိုင်း စီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရာတွင် မတူညီသော အသိုင်းအဝိုင်းများအကြား ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ရာတွင် အရေးကြီးပါကြောင်း၊ အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့က ကော်မရှင်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို အထောက်အကူပြုစေရန် နေရပ်စွန့်ခွာသူများ၏အမည်များကို ဖော်ပြပေးလိုပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပသတင်းမီဒီယာများက အကြံပေးအဖွဲ့နှင့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု အခြေအနေ၊ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှ နေရပ် စွန့်ခွာသူများ၏ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်အခြေအနေ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတကာဖိအားပေးမှုများကိုအစိုးရအနေဖြင့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေနှင့် အကြံပေးအဖွဲ့၏ရခိုင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဦးတည်သည့် အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သိလိုသည်များ ကို မေးမြန်းကြရာ အကြံပေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များက ရှင်းလင်းဖြေကြားကြသည်။
အဆိုပါ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ၏ အကြံပေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Dr. Surakiart Sathirathai၊ Mr. Roelof Petrus (Roelf) Meyer ၊မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြ၊ အငြိမ်းစားကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးထွန်းမြတ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးခင်မောင်လေး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီဝင် ဒေါက်တာခင်ညို၊ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ သတင်းမီဒီယာများ တက်ရောက်ကြသည်။